ကိုရိုနာ ကြောင့် ကုန်ေ ဈးနှု န်း မတက်ပဲ..ပုံမှန်ထက်တောင် လျော့ပြီးတော့ ရောင်းနေတဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ မန္တလေးသားများ.. – Na Pann San
ကိုရိုနာ ကြောင့် ကုန်ေ ဈးနှု န်း မတက်ပဲ..ပုံမှန်ထက်တောင် လျော့ပြီးတော့ ရောင်းနေတဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ မန္တလေးသားများ..
Na Pann | March 18, 2020 | Local News | No Comments
ခု ဆို ရင် WHO က ဝူ ဟန် ဗိုင်းရပ်စ်ခေါ် Covid-19 ကို ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါ အဖြစ် ကြေငြာခဲ့ပြီဖြစ် သလို ၊နိုင်ငံတော်တော် များများမှာလည်း Panic Buying လို့ခေါ်တဲ့ စိုးရိမ် စိတ်ကြောင့် ကုန်စည်တွေကို ယခင်ထက် ပိုမိုစုဆောင်းတာတွေ လုပ်နေကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မန်တလေး သားတွေ ကတော့ ဒီလို မဟုတ်ပါဘူး။ ယခင်ဈေးထက်တောင် လျော့ရောင်းပေး ပါသေးတယ်။ ပြီးတော့ စိုးရိမ်စိတ် မရှိကြဖို့နဲ့ ဆန်တွေလည်းရှိတဲ့ အကြောင်း ဆန်လည်း မပြတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေကို အသိပေးလာပါတယ်။ ဒီလို အသိပေးတဲ့ မိတ်ဆွေ တစ်ယောက်ကို မေးကြည့်တဲ့ အခါမှာတော့….
“တစ်နိုင်ငံ လုံး ဒုက္ခရောက်နေချိန်မှာ ကိုယ့်အတွက်ပဲ အမြတ်ကြီးစားရမှာ ရှက်လို့ပါ ”ဆိုတဲ့ စကားဟာ အတော်လေး သင်ခန်းစာယူစရာမို့ အားလုံး သိအောင် မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဒီလိုစိတ်ထားမျိုးကို အတုယူနိုင်ကြပါစေ။
ခုဆို ရငျ WHO က ဝူဟနျ ဗိုငျးရပျဈချေါ Covid-19 ကို ကမ်ဘာ့ ကပျရောဂါ အဖွဈ ကွငွောခဲ့ပွီဖွဈ သလို ၊နိုငျငံတျောတျော မြားမြားမှာလညျး Panic Buying လို့ချေါတဲ့ စိုးရိမျ စိတျကွောငျ့ ကုနျစညျတှကေို ယခငျထကျ ပိုမိုစုဆောငျးတာတှေ လုပျနကွေပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ မနျတလေး သားတှေ ကတော့ ဒီလို မဟုတျပါဘူး။ ယခငျဈေးထကျတောငျ လြော့ရောငျးပေး ပါသေးတယျ။ ပွီးတော့ စိုးရိမျစိတျ မရှိကွဖို့နဲ့ ဆနျတှလေညျးရှိတဲ့ အကွောငျး ဆနျလညျး မပွတျပါဘူးဆိုတဲ့ အကွောငျးတှကေို အသိပေးလာပါတယျ။ ဒီလို အသိပေးတဲ့ မိတျဆှေ တဈယောကျကို မေးကွညျ့တဲ့ အခါမှာတော့….
“တဈနိုငျငံ လုံး ဒုက်ခရောကျနခြေိနျမှာ ကိုယျ့အတှကျပဲ အမွတျကွီးစားရမှာ ရှကျလို့ပါ ”ဆိုတဲ့ စကားဟာ အတျောလေး သငျခနျးစာယူစရာမို့ အားလုံး သိအောငျ မြှဝလေိုကျပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံသားမြား ဒီလိုစိတျထားမြိုးကို အတုယူနိုငျကွပါစေ။
ချစ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ယောက်ျားဖြစ်သူ ကို ကိုယ်လွတ် ရုန်းစေပြီး ထောင်ကျခံ ခဲ့ တဲ့ အမျိုးသမီး
ဧပြီလ ၁ ရက်မှ ၃၀ ရက်နေ့ အထိ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း နမ့်စန်မြို့နယ် တွင် ညမထွက်ရ အမိန့်ထုတ်ပြန်
ဂုဏ်ပြုတဲ့လူတန်းစားမရှိတဲ့ ကိုယ်တို့နိုင်ငံမှာ သူရဲကောင်းတွေဟာ ဈေးများသိပ်ပေါနေသလား….
မြောက်ဥက္ကလာ လမ်းဝတံတားပေါ် မှ YBS – ၁၆ ယာဉ် လူနေအိမ်တွေပေါ် ထိုးကျ ၊ အမျိုးသား ၈ ဦးနဲ့ အမျိုးသမီး ၁၄ ဦး စုစုပေါင်း (၂၂)ဦးကို ဆေးရုံပို့ဆောင်
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကပ်ရောဂါကာလ အတွင်း မီတာခများ လျှော့ချပေးမည်ဟု နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော